Isikrini seGlass S8 siya kuhlala phantse yonke indawo engaphambili yesiphelo | Iindaba zeGajethi
Isikrini seGPS S8 siyakuhlala phantse kuyo yonke indawo yesiphelo
Amarhe ngamarhe, zisenokuba okanye zinganyani, kodwa kukho inani elikhulu labasebenzisi abathanda ukwazi lonke ulwazi olunxulumene nophawu lwabo abaluthandayo okanye isiphelo sendlela abaceba ukuyifumana. Ngelixa kuyinyani ukuba amarhe ajikeleze i-iPhone 8 asesekude kuqinisekiswa, ukusungulwa kwayo kucwangciselwe unyaka, ngoSeptemba 2017, amarhe ajikeleze iGPS S8, athembekile, kuthathelwa ingqalelo into yokuba intetho yayo kulindeleke ngaphakathi kwesakhelo seNkomfa yeHlabathi yeHlabathi izakubanjelwa e-Barcelona ekupheleni kuka februwari kunyaka ozayo.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngeMi Mix, iXiaomi terminal entsha esasinikayo, ngokwendlela eboniswe ngayo, isikrini esigubungela phantse lonke umphambili wesiphelo, kodwa oko akunjalo, sele ineefreyimu , nangona zibhityile, azinjalo njengoko uXiaomi wayebhengezile. Isamsung kangangeminyaka embalwa, ibonelela ngokwahluka kwe-Edge, i-terminal eneglasi egobile kumacala omabini, Ijika elinganwenwela kwinxalenye ephezulu yesiphelo kwaye ke sikwazi ukufumana umlinganiso wescreen se-90%.
Okwangoku umndilili wesikrini kwiitheminali ezininzi zikufutshane nama-80%, kodwa yonke into ibonakala ngathi kulo nyaka uzayo lo mlinganiselo uzokwanda kakhulu kwaye i-Samsung S8 ibonakala ngathi yenye yeetheminali zokuqala ukufikelela kwimakethi, inika isikrini ngaphandle kwezakhelo kumacala nangaphezulu kwesikrini, into uXiaomi ephantse wayifumana ngeMi Mix. Olu lwazi luthathwe kwiingxelo zenye yeenjineli zecandelo lokubonisa le-Samsung apho ithi inkampani yaseKorea izakusungula i-terminal enepaneli eya kuthi igcine umyinge we-90% yomlinganiso ngaphambili kunyaka olandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isikrini seGPS S8 siyakuhlala phantse kuyo yonke indawo yesiphelo
I-Alienware 13 ilaptop ekulungele i-VR enobungakanani obunqandiweyo
I-Apple Music inokuhlisa ixabiso lemirhumo yayo